स्वास्थ्य Archives - Page 84 of 127 - Sabal Post
सबैले सेवन गर्दा राम्रो मानिने लसुन, यस्ता लक्षण भएका ब्यक्तीका लागि बिष समान
होसियार ! यस्ता व्यक्तिले लसुन खाँदै नखानुहोस नमस्कार साथीहरु, म तपाईको चिरपरिचित मित्र, तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी दिन सदाको जस्तै आज पनि तपाईको सेवामा स्वास्थ सम्बन्धि महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी लिएर उपस्थित भैसकेको छु
२४ बैशाख २०७६, मंगलवार विस्तृतमा »
हाम्रै वरपर पाईने घ्युकुमारीको सेवन देखि लेपन गर्दा अनेकन फाईदा, जानकारी लिनुहोस
घ्युकुमारीको करिब २ सय ५० प्रजाति रहेका छन् । यसमध्ये केही प्रजातिमात्र औषधीय गुण हुने गर्छ । यसमा सबैभन्दा प्रभावशाली प्रजाती बार्बाडेन्सीस वा एलोभेरा हो । हाम्रो शरिरको सही विकाका लागी २१ वटा एमिनो एसिडको आवश्यकता पर्छ । यसमा १८
घाँटीमा केही अड्किएमा लाली गुराँस हुन्छ अचूक औषधि, यस्ता छन् लाली गुराँसका फाइदाहरू !
यतिबेला गुराँस फूल्ने मौसम सुरु भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ढकमक्क गुराँस फूलेर जंगलनै हराभरा भएको होलान् । यो जंगलमा फुल्ने यस्तो फूल हो, जसको सौन्दर्यमा जो कोहि मोहित हुन्छन् । त्यसो त लाली गुराँस नेपालको राष्ट्रिय फूल पनि हो
बाजुरा - जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका–५ बँच्छ्या, क्युडी त्यस्तै ६ नं वडाको पाडीमा फैलिएको भाइरल ज्वरोको सङ्क्रमण अहिले सामान्य हँुदै गएको छ । सिङ्गो गाउँ नै प्रभावित हुने गरी फैलिएको सङ्क्रमण दिनप्रतिदिन सामान्य हुँदै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ ।
​के भातले मोटो बनाउँछ ? त्यसो भए भात नखाने पश्चिमाहरु झन् किन धेरै मोटा ?
एजेन्सी- धेरैले सोच्छन्, ‘भात खाए भुँडी लाग्छ। सकेसम्म बेलुकी भात नखाऔं।’ तर, यो भ्रम मात्र हुन सक्छ। हालैको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले भात खानेभन्दा नखानेहरूको भुँडी बढी लागेको देखाएको छ। यो अनुसन्धानमा मुख्य खानाका रूपमा भात र अरू खाद्यपदार्थ खाने संसारभरका
बिहे नभएकी युबतिले जन्माइन् शिशु , पुर्नका लागि खाल्डोमा राख्दा श्वास फेरेपछि अस्पताल भर्ना !
चितवन - एक शिशुको मृत्यु भएको भनी दाहसंस्कार गर्न देवघाट लगेर पुर्नका लागि खाल्डोमा राख्दा श्वासप्रश्वास गरेको देखेर फर्काई पुनः अस्पताल ल्याइएको छ । चितवन मेडिकल कलेजमा आइतबार जन्मिएकी शिशुलाई उपचार सम्भव नभएको चिकित्सकले जनाएकाले परिवारले घर लैजान्छु भन्दै अन्त्येष्टिका
२३ बैशाख २०७६, सोमबार विस्तृतमा »
सावधान १ यसो गर्दा निःसन्तान हुने समस्या आउन सक्छ
एजेन्सी -विवाहित जोडी निःसन्तान भए भने त्यसभन्दा दुःखदायी कुरा अरू के हुन सक्ला रु वैज्ञानिकहरूले निःसन्तान हुनुका पछाडिको एउटा कारण हालै पत्ता लगाएका छन् ।निःसन्तान बनाउने एउटा भाइरसलाई वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका हुन् र यो भाइरस किसमार्फत सर्छ । इटालीका अनुसन्धानकर्ताहरूले
भाइरल ज्वरोले एकको मृत्यु,मौसमी रोगका बिरामी बढे
बाजुरा– जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका–५ क्युडी र ६ को पाडीगाउँमा एक सातादेखि भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढेको छ । भाइरल ज्वरोका कारण एकको मृत्युसमेत भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख अशोक सिंहले बताए । मृत्यु हुनेमा क्युडीकी ५५ वर्षीया छञ्चकला बुढा रहेको
२२ बैशाख २०७६, आईतवार विस्तृतमा »
दाँत किराले खाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय
पाचन प्रक्रियामा दाँतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । खानालाई चपाउन दाँतको सबैभन्दा महत्त्पूर्ण कार्य हुन्छ । दाँतले व्यक्तिको सुन्दरतालाई पनि प्रभावित पार्ने गर्छ । तर दाँतको राम्रोसँग हेरचाह र ख्याल गरिएन भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । किराले दाँतमा आक्रमण गर्दा
२१ बैशाख २०७६, शनिबार विस्तृतमा »
भुइँमा सुत्नुका यस्ता छन् फाइदा
एजेन्सि - भुइँमा बस्न छोडेको कति वर्ष भयो ? बस्न र खाना खान पनि तपाईं कुर्सीकै प्रयोग गर्नुहुन्छ, हैन त ? अब भुइँमा सुत्नुभएको छ भनी प्रश्न सोध्दा तपाईं हाँस्नुहुन्छ होला ।पहिला हाम्रा पूर्खाहरू भुइँमा नै सुत्थे । तर हामी